ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | မောင် (အစ-အဆုံး) | Darling (Full Movie) | English Subtitle | Myanmarmovie
Watch other movies such as
ရွှေစင်ဦး ရုပ်ရှင် ရုပ်သံလိုင်းရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို ကျေနပ်နှစ်သက်မှုရှိပါရဲ့လား? ချစ်ပရိသတ်တို့အတွက် ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီတဲ့အနေနဲ့ Like, Share & Subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ ယခု ချန်နယ်မှ ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းဟာ သင့်အတွက် အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Are you enjoying watch Myanmar movies on Shwe Sin Oo channel? We'll be posting more Shwe Sin Oo movies and movies from other companies too. Like, Share & Subscribe to help us out. This channel is free for all of our fans. Haveanice day!
Music on this movie:
LICENSE CERTIFICATE: Envato Elements Item to Shwe Sin Oo & SSO motion picture Co, Ltd.
#မြန်မာဇာတ်ကား #ShweSinOomovies #Myanmarmovie #shwesinoo", "duration": "02:45:14", "name": "ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | မောင် (အစ-အဆုံး) | Darling (Full Movie) | English Subtitle | Myanmarmovie", "thumbnail": "https://i.ytimg.com/vi/qf25rXFYML8/maxresdefault.jpg" } }
8 Views· 14 May 2022
🌟သရုပ်ဆောင်များ- နေတိုး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ ဂန္ထ၀င်၊ မြင့်မြင့်ခိုင်၊
"မောင်" ဇာတ်ကားကို အစမှအဆုံး တစ်ထိုင်တည်းကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုသော ချစ်ပရိသတ်များရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အင်္ဂလိပ် စာတန်းထိုးလည်းပါ၀င်ပါသည်။
00:00:44 Chapter 2
00:09:15 Chapter 3
00:13:24 Chapter 4
00:16:40 Chapter 5
Watch more Myanmar movies online at http://bit.ly/3cFYPjG
#မြန်မာဇာတ်ကား #ShweSinOomovies #Myanmarmovie #shwesinoo